Pfupi biography yemudetembi Octavio Paz | Zvazvino Zvinyorwa
Kana tichifanira kutaura nezvazvo Octavio ZuvaIsu tinotanga tamuisa muzera rekunyora kuti tinzwisise basa rake. Octavio Paz yaive yenguva iyo yaakagadzirwa post-avant-garde nhetembo. Kana nhetembo avant-garde yakadonhedzwa muma20, Octavio Paz yaive yenguva yakatevera iyi avant-garde, yaizoitika mu 30s.
Makumi makumi matatu akararama kuburikidza nenguva yemakakatanwa makuru ezvematongerwo enyika nevehukama pasirese, izvo zvaifadza zvikuru kuzivikanwa kwevanyori vaigara panguva iyoyo. Nekudaro, vanyori vanofarira Cesar Vallejo o Pablo Neruda vakashanduka vakananga mukudzokororazve nhetembo yake. Nhetembo dzeHispano-America, pasina pachena kuramba zvakaitwa zvenguva yeantant-garde, zvakasimudzira kuzvipira kwayo kuchokwadi chaive chichirarama, asi mune ino shanduko kusvika nhasi yatiri kurarama nhasi, yakachinjika munzira dzakasiyana uye dzakasiyana. .
Octavio Paz haasiriye ega anga ari wenguva ino post-avant-garde asiwo vadetembi vakaita sa Nicolas Guillén, ine inozivikanwa se nhetembo nhema, Nikanor Parra pamwe chete navo "Antipoems" y "Zvigadzirwa", Dulce Maria Loynaz pamwe chete naye "Nhetembo dzakachena", Zvinoreva zvezita, mavambo, kutenderana kwezita rechirongwa Carranza pamwe chete naye classicism o Ernest Cardinal, uyo kubva pachinzvimbo chake sechitendero, akaimba nziyo dzetariro nezveramangwana revanhu.
Asi tichitarisa pane chimiro chinotinetsa nhasi, ngatiitei iyi pfupi biography yeOctavio Paz: hupenyu nebasa.
Hupenyu nebasa reOctavio Paz
Octavio Paz akaberekwa muna 1914 muMexico City uye akafa muna 1998 mutaundi rekwake.. Aive mudetembi (sekutaura kwatamboita), mudetembi, munyori wenyaya uye mumiriri weMexico, uye kana chinhu chimwe chete chikamira, pakati pezvimwe zvinhu zviri pachena, ndechekuti muna1990 akapihwa Mubayiro weNobel weMabhuku. Basa rake semumiriri raizomutendera kuti ave nemukana wekugara muFrance, uko kwaakasangana ne surrealism. Akafamba zvakare kuburikidza nenyika yedu, Spain, pamusoro pekuziva India neJapan.
Pfungwa dzemunyori uyu dzaigara dzakabatana kuruboshwe uye nekuda kweichi chikonzero aifarira maRepublican panguva yehondo yevagari vemuSpain yaakanyora mavhesi anoumba nhetembo yainzi "Kwete kupfuura". Pamusoro pechinhu ichi chakazvipira, tinofanirwa kunongedzera kwakakura kwakasiyiwa nefilosofi yekuEastern nemafungiro ake panguva yekugara kwake mukondinendi, iyo yakaratidzirwa mune rake basa.
Iye anoita basa mune kunetseka kwakakosha mutauro. Basa rake "Uta nembira" (1956), chinyorwa chakakosha chinoita kuti tinzwisise nhetembo dzemunyori weMexico: zvinhu zvakaita senhetembo uye nhetembo, mutauro, mutinhimira, kuzvitsaurira kwenguva, yezvazvino, yazvino, zvinoumba mibvunzo ine chekuita nezveichi chinyorwa. . Kune rimwe divi, rake basa "Zuva dombo", rakaburitswa muna 1957, ndeimwe yenhetembo dzakakura kwazvo uye dzakakosha dzeLatin America, uko kwakasiyana nziyo dzekutamba (nyika, hukama hweI-iwe, huripo, chiriporipocho, tsvagurudzo, eroticism, ...) inopindirana nekuratidzira kwanyanduri pamusoro payo kugadzira maitiro. "Chena" (1967) inoumba nhetembo yemuchadenga, kuverengwa kwacho kunogona kuitwa nenzira dzakasiyana, zvine zvinyoronyoro zvemukati uye hukuru hwemitauro. Basa rake "Kare mune yakajeka" (1978) inzira yekutsvaga, kutsvaga kunotanga nekufungisisa uye kudzikama nezve maitiro ekunyora pachawo.
10 Mitsara naOctavio Paz iyo yatichagara tichimurangarira nayo
«Rudo runoberekwa kubva pakupwanya; hushamwari hwekuchinja kazhinji uye kwenguva refu ».
"Eroticism uye nhetembo: yekutanga chirahwe chebonde, chechipiri eroticization yemutauro."
"Kufungidzira murusununguko kunoshandura nyika nekuputira zvinhu kumusoro."
"Kudzivirira zvisikwa ndiko kudzivirira varume".
"Mukusangana kwese kwekushushikana kune munhu asingaonekwe uye anogara achishingaira: fungidziro."
«Hapana vanhu vanotenda muhurumende yavo. Kunyanya, vanhu vakasiya basa.
"Nhetembo dzinofanira kunge dzakaoma zvishoma kuti dzipise zvakanaka, uye nokudaro dzinovhenekera nekutidziisa."
"Kusakendenga kwekuMexico kurufu kunosimbiswa nekusava nehanya kwake nehupenyu."
"Pasina democracy, rusununguko chimera".
"Nyika isina sarudzo dzakasununguka inyika isina izwi, isina maziso, uye isina maoko."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nhoroondo yeOctavio Paz
chokwadi chinonakidza kwazvo
Pindura kuna 3333
zvakanaka kwazvo ndatenda ndibatsireiwo kubasa rangu rechikoro 🙂
orlando octavio akadaro
Pindura kuna orlando octavio